ဟောပြောခရစ်တော်, သူတို့ကိုဘုနျးတျောကိုပြရန် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဒီဗီဒီယိုနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှာခရီးစဉ်ရဲ့အထွေထွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေ အမွေအနှစ်ညီလာခံ 2013.
ဒီကွန်ဖရင်၏ဆောင်ပုဒ် Soli Deo ဂလိုရီယာဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ဘုန်းအသရေတယောက်တည်းကိုဘုရားသခင်အား. ဒါကအလွန်ကြီးစွာသောဆောင်ပုဒ်င်. ကျွန်တော်တို့လည်းရှုထောင့်ချင် - ထိုဠာအပေါင်းတို့၌ဘုန်းအသရေတယောက်တည်းဘုရားသခငျသညျနှငျ့ဆိုငျသော, ကြှနျုပျတို့ပွုတိုင်းတစ်ခုတည်းအရာအကြောင်းကြားရန်. ငါ့အချိန်ယနေ့ညစဉ်အတွင်း, ငါလုသောငါတို့ဧဝံဂေလိအကြောင်းကြားဘယ်လိုစဉ်းစားရန်လိုခငျြ.
ယေရှုအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြကြှနျုပျတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ကျနော်သိလိုက်ပါတယ်သောသူတို့သည်လည်းထိုအမှုအရာတစျခုဖြစ်ဟန်, သေးအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်လုံလောက်လုပ်နေတာမဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရ. ငါလက်ျာဘက် Am? ငါတယောက်တည်း Am? တောင်မှပဲဒီအတိတ်အပတ်က, ငါသည်ငါ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုနှင့်အတူတည်ဆောက်ရန်စတင်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုချွတ်လဲစတင်ခဲ့ပြီငါပြစ်ဒဏ်ခံစားခဲ့. ငါအကြောင်းကြောင်းဆကျဆံရေးအပျေါကိုတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအဖြစ်ဖြစ်ကြပြီမဟုတ်, နှင့်ယေရှုအကြောင်းသူ့ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားရန်ဆက်လက်. ငါမကြာခဏဤနည်းခံစားရတူနှင့်ပုံ. ငါမေးချင်သောမေးခွန်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်? fixed ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဘယျသို့နှလုံးရှုထောင့်? ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုသက်တမ်းတိုးရမည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ငါကလုပ်နေကြတာပါဘာကြောင့်သတိရဖို့ရှိသည်.
အခုတော့ဧဝံဂေလိကြောက်စရာနဲ့ Hard နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင်းမျှသံသယရှိပါတယ်. ထိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ပေါ်တတ်သောအရာကိုပဲင်. သူများတွေဘာကြောင့်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်း? သူတို့တစ်တွေကယ်တင်ရှင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်နှငျ့ယရှေုကိုသာလမ်းကြောင်းသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုနေတစ်စုံတစ်ယောက်ကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေ, ကျွန်ုပ်တို့၏ "ဒဏ်ခံ" ယဉ်ကျေးမှုကိုရန်စကွဝဠာထဲမှာအဆိုးဆုံးရာဇဝတ်မှုများကဲ့သို့ပုံရသည်. ဒါဟာထိုးစစ်င်.
ဒါဘာကြောင့်ကျနော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းသင့်တယ်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မည်သူမျှကြားဖို့လိုသည်. ပြည်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းတီး. လူတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလနောက်ကွယ်မှနေဟုပြော. လူတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်မမီတော့စိတ်ကူးများနှင့်အတူဟောင်းခေတ်မမီတော့စာအုပ်ဖက်တွယ်နေဟုပြော. ကျနော်တို့ဟာမှောင်မိုက်၌နထေိုငျ, ရန်လိုကမ္ဘာ. ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်
ကျနော်တို့ကလုပ်နေလုပ်နေအဘယ်ကြောင့်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်အရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ငါတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လူတိုင်းအတင်းနိုင်ပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောနေကြတယ်? ကျနော်တို့ကျန်တဲ့အလူတိုင်းထက်ပိုကောင်းပါတယ်ထင်တဲ့သူ bigots င်ကြောင့်ထိုသို့ပြု? ငါတို့ရှိသမျှသည်မှီဝဲရန်နှင့်သညျယရှေုကိုပြုလိမ့်မည်မြျှောလငျ့ခကျြတခြို့ကိုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်ထိုသို့ပြု? အဘယ်သူမျှမ. ကျွန်တော်တို့ကလူသညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်ချင်သောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောကွ. အကြှနျုပျတို့သားတော်၌ဘုန်းအသရေကိုကြည့်ပါ.
သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေသဘောမပေါကျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူးယစ်ဆေးစွဲမြင့်မားရ. အဆိုတော်တွေဟာမိမိနာမအကဲ့ရဲ့နဲ့ယေရှုနှင့်အတူတစ်အဆင့်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်, သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေသဘောမပေါကျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် Young က dudes အချင်းချင်းပစ်သတ်, သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေသဘောမပေါကျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေသဘောမပေါကျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Young ကမင်းသမီးဆက်ဆံရေး၌မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးစားထား. သူတို့မြော်လင့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အစိတျဓာတျလူငယ်သတ်သေကျူးလွန်, သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေသဘောမပေါကျပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. သူတို့ဝငျကမျြး၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုမွငျနှင့်ခရစ်တော်အတွက်မယုံကြည်ကြပြီလူတွေကငရဲကိုသွား. ဘုရားသခင့ကိစ္စရပ်များကို၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်လျှင်, ကျွန်တော်သူတို့ကိုမြင်ရချင်.
ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကို၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေ၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းရလာတဲ့အခါ, ကျနော်တို့အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှ. ဒီတော့သူကလူမှောင်မိုက်ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောကိုမွငျကိုကူညီဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြကုန်အံ့, လူပင်ကိုယ်တော်ကိုသိချင်ကြပါဘူးဘယ်မှာ.
တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူနှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမုန်းသောသူလူတို့တွင်အစေခံကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသိ. ကျနော်တို့မကြာခဏထိုအက္ခရာများကိုရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်ပေါလုကဒဿနပညာရှင်တက်ခြေတော်နှင့်အတူကမ်းခြေပေါ်မှာတစ်နေရာရာမှာထိုင်လျက်ကြောင်းစိတ်ကူး. အဘယ်သူမျှမ, ပေါလုကိုမှန်ကန်အခက်အခဲများနှင့်အတူစစ်မှန်သောကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျနထေိုငျ - နည်းလမ်းများစွာအတွက်အများကြီးပိုပြီးခက်ခဲငါတို့ထက်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာကြီး. ထိုအခါဤစာကြောင်းစကားစပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်.
ကောရိန်သုအသင်းတော်ပေါလု၏ဒုတိယအက္ခရာအတိုက်အခံများ၏မျက်နှာအတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိသူ၏ဓမ်မအမှုတစ်ခုကာကွယ်ရေးနှင့်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်. ငါနှင့်အတူအလှည့်2ကောရိန္သု 4:1-6.
ထိုကွောငျ့, ဘုရားသခငျ၏ကရုဏာတရားအားဖြင့်ဓမ္မရှိခြင်း, ကျွန်တော်တို့နှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူး.2ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရှက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြ, မညျ့လြှို့ဝှကျနညျးလမျးမြား. ကျနော်တို့ကောက်ကျစ်လေ့ကျင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏စကားလုံးနှင့်အတူတမ်ပါဖို့ငြင်းဆန်, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားဖွင့်ကြေညာချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌လူတိုင်း၏စိတ်မှကိုယျ့ကိုယျကိုခြီးမှမျးမယ်လို့.3“နှင့်ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်ပင်, ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသောသူတို့အားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ.4သူတို့၏အမှု၌ဤကမ္ဘာ၏ဘုရားမယုံကြည်သောသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်မကျြစိကှဖြစ်ပါတယ်, ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအလငျးကိုမွငျလြှငျမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်ပါသည်.5ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မကကြွေးကြော်ဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ, ဒါပေမယ့်သခင်အဖြစ်သညျယရှေုခရစျသ, ယေရှုအတွက်သင်တို့၏ကျွန်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှင့်အတူ.6ဘုရားသခင်အဘို့, အဘယ်သူသည်ဟုဆိုသည်, "မှောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းပါစေ,"ယရှေုခရစျ၏မျက်နှာ၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းရာအလငျးကိုပေးစေခြင်းငှါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ထွန်းလင်းခဲ့သည်. (2 ကောရိန္သု 4:1-6)
သငျသညျဝငျကမျြးထဲမှာယုံကြည်သူဆိုရင်, သငျသညျဝငျကမျြးတစ်န်ကြီးဖြစ်ကိုခေါ်ခဲ့ကြရတယ်. ဒါကြောင့်ငါပေါလုရဲ့စံနမူနာကိုကြည့်ရှုချင်နဲ့ကျွန်မမှောင်မိုက်ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဓမ်မအမှုအတှကျလေးသင်ခန်းစာတွေကိုထောက်ပြချင်
ငါ. သောကြောင့်ယောက်ျားများ၏ငြင်းပယ်ခြင်းကိုမဟုတ်ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းပြုပါ (1-2)
ငြင်းပယ်ခံရခက်ခဲသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကကြုံတွေ့ဖူးတဲ့. လူစိတ်ဓာတ်ခံရဖို့အတှကျဒါဟာသဘာဝကဖွင့်, နှင့်ထိခိုက်စေ, သူတို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကဆက်ကပ်သောအခါမိမိတို့ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုဆင်းလှည့်. တစ်ဦးကခုန်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်တောင်းသတ္တမတန်းယောက်ျားလေးကနေ, သငျသညျမှလျှောက်ထားကြောင်းကောလိပ်မှအောင်မ, သငျသညျဒါကြောင့်အသည်းအသန်စေချင်ကြောင်းအလုပ်ဆိုတော့မဟုတ်မှ, ငြင်းပယ်ခံရခဲယဉ်းသည်.
တမန်တော်ပေါလုကဧဝံဂေလိတရားကိုမိမိဓမ်မအမှု၌ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်အတိုက်အခံများ၏ပဒေသာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း. သူ့အစာအများအပြားအတွက်သူသည်မိမိအကျင့်စရိုက်နဲ့သူ့ရဲ့နည်းစနစ်နှင့်သူ၏သတင်းစကားကိုခုခံကာကွယ်ဖို့သိပ်အတင်းအဓမ္မင်နိုင်အောင်. သူ၏ status ကို undisputed မခံခဲ့ရ.
သငျသညျပေါလုရဲ့အနေအထားဖြစ်ခြင်းစိတ်ကူးနိုင်သလား? သငျသညျကောရိနသုမြို့သို့သွား၏, ဒီအယူမှားရုပျတုကိုးရာအရပျ, သငျတို့သညျသူတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောခဲ့. သင်သည်ထိုသူတို့ကိုခစျြ. သို့သျောလညျးယခု, အချို့သော naysayers သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်သံသယမျိုးစေ့ကိုကြဲခဲ့ကြ. သငျသညျအကွောငျးကိုသံသယ, နှင့်သင့်စိတ်ရင်း, နှင့်သင့်သှနျသငျ. ဒါကနှိပ်စက်တာ.
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကပေါလုကိုတုံ့ပွနျဘူး? ကျမ်းပိုဒ်မှာကြည့်ပါ 1.
“ထိုကွောငျ့, ဘုရားသခငျ၏ကရုဏာတရားအားဖြင့်ဓမ္မရှိခြင်း, ကျွန်တော်တို့နှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူး။”
ပေါလုကသူနှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူးပြောပါတယ်. သူဒီလိုဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်င်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းစိတ်ပျက်အားလျော့မယ့်ကားဟုင်. သူကစိတ်ဓာတ်ကျလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး, နှင့်ချီပေးထား, နှင့်ပဝါထဲမှာပစ်ချသို့မဟုတ်သူ၏အသက်ကိုပေးတော်မူရန်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့. သူကအငြိမ်းစားနှင့်အစားတစ်ဦးကဝေမဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်မထားပါဘူး. အံ့သြဖွယ်သောအရာ, ဒီငြင်းပယ်ခံရတူဘာစဉ်းစား. ပေါလုသည်ရှောက် သွား. အရာအားလုံးကိုစဉ်းစား. ထောင်ကျခံထဲကနေ, ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ခြင်း, ပယ်ချ. ရှင်ပေါလုဆဲနှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူး; ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့သွေးဆောင်ခံရမယ်လို့အတိအကျဘာရာဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားကို shared နှင့်သူတို့ကပယ်ချခဲ့ဖူး? ငါ့မှာရှိတယ်. လူသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးပြောကြသောအခါ, ငါသည်အကြိမ်ထင်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ငါနှင့်အတူစောဒကတက်နှငျ့ဘုရားသခငျကိုမှန်ကန်မဟုတ်ခဲ့ပြောတယ်, သူတို့ကိုငါနှင့်အတူမျှဝေပြီးနောက်လိုက်တယ်ပြုမူငါ့ကိုရှောင်ရှားရန်စတင်ခဲ့သူကိုသို့မဟုတ်လူ, မှထုတ်ပြန်သောငါ့ကိုအော်ငါ့ကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့သူကိုတောင်လူ. သင်ဘယ်လိုကြောင့်တုံ့ပြန်ရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသည်? ဒီတစ်ခါလည်းသင်ရန်ပွဲမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါမတိုက်နိုင်. ကျွန်တော်တို့အများစုဟာစိတ်ဓာတ်ခံရဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသည်မယ်လို့, နှင့်အရှုံးမပေး. အဘယ်သူသည်အုတ်မြို့ရိုးကိုသို့အပြေးစောင့်ရှောက်ရန်လိုလား?
ဒါနဲ့သူကနှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူးဟုဆိုပေါလုရဲ့စကားဖတ်ရသောအခါ. ငါအံ့သြတယ်. ငါကသူမကိုဘယ်လိုသိလို. အဘယ်ကြောင့်သူနှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူး? သူသည်ဤကျမ်းပိုဒ်၌တရားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်.
ပေါလုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခငျသညျအထံတော်ပေးတော်မူပြီသောဓမ်မအမှု၏တန်ခိုးအာနုဘော်၏နှလုံးမဆုံးရှုံးပါဘူး. အခနျးမှာဒီရှေ့တော်၌လက်ျာ 3, ပေါလုသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဝန်ကြီးဌာန၏ဘုန်းအသရေကိုရှင်းပြအချိန်တစည်းသုံးစွဲ. လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ဤဘက်မှာသူတို့အားတဦးဖြစ်ခြင်း၏ဘုန်းအသရေ, ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဟောပြောဖို့ရသူအ.
ပေါလုရဲ့အားပေးမှုကိုအဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကမှလာ, သူမဆိုအပ်ပေးတော်မူအချိန်တွင်ခံစားရမဘယ်လိုအောင်မြင်. သူကဒီလမ်းအတွက်အစေခံရန်ညျဘုရားသခငျ၏ကရုဏာတရားအားဖြင့်ရှေးခယျြခဲ့ကျေးဇူးတင်င်. သူကအခွင့်ထူးခံစားရ. တကယ်တော့, သူသည်ဤပဋိညာဉ်တရားသစ်ဝန်ကြီးဌာန ပို. ပင်ဘုန်းပွင့်မောရှေ၏အဟောင်းပဋိညာဉ်တရားကိုဝန်ကြီးဌာနထက်ကြောင်းထောက်ပြ. ထိုအခါပေါလုကအားလုံးကိုလူမျိုး၏သူသည်ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားသခငျ၏မသနားတျောမူကွောငျးကိုသိတယ်. အသင်းတော်ကိုမုန်းကြနှင့်ခရစ်ယာန်ကိုညှဉျးဆဲသောသူသည်.
ဘုရားသခင်၏လူတို့အဖြစ်, ငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကလူကို message တုံ့ပြန်ပုံကိုအပေါ်အခြေမခံ. ဧဝံဂေလိတရားကိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းလူများကတုံ့ပြန်ပုံကိုအပေါ်အခြေမခံ. ဒါဟာခေါ်ဆိုမှုကိုယ်တိုင်က၏ဘုန်းအသရေအပေါ်အခြေခံပြီးင်.
ဒီအခန်းရှိလူမောရှေသည်မိမိကိုမိမိ၏ဝန်ကြီးဌာနကထက်ဘုန်း သာ. ကြီးတစ်ဦးဝန်ကြီးဌာနကအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူကြောင်းမယုံနိုင်စရာဒါဟာင်. သငျသညျကနားလညျပါနဲ့? လုံလောက်တဲ့သူတို့၏ကောင်းသောမမြင်ရအောင်ကြဘူးမသာသောကြောင့်, ငါတို့မူကားသူတဦးအကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြရ. ကျနော်တို့ကတစျခုဖွစျသညျအတိအကျအဘယ်သူသိ. ကျနော်တို့ကလူသညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေပွဲထုတ်မိတ်ဆက်တွေ့မြင်ကူညီရ! ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သို့လူဦးတည်သွားစေရ.
ခရစျယာ, ကျွန်တော်တို့နှလုံးမဆုံးရှုံးသင့်ပါ. ငါငါတို့သည်ငါတို့၏ကမ္ဘာ၏မှောင်မိုက်ကိုမှာဝမျးနညျးမဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုလိုဘူး. ကျနော်တို့ဟာစိတ်ပျက်အားငယ်ဖြစ်နဲ့ပဝါထဲမှာပစ်မထားသင့်ကြောင်းသာဆိုလို. သူတို့ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုငြင်းပယ်ခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကမဆိုလျော့နည်းဘုန်းပွင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါမထားဘူး.
B က. အရှက်တကွဲအကျိုးမညျ့လြှို့ဝှကျနည်းလမ်းများစှနျ့လှ
ပေါလုကညစ်ပတ်ပေရေနှင့်ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေလျက်ဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲခဲ့ကြပေမည်. သူ၏ဇာတ်ကောင်မေးခွန်းသို့ရောက်လာသော. ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုသညျမိမိကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်, ဟုဆို, "ဘယ်သူမျှမက, ကျနော်တို့ကစွန့်လွှတ်မယ့်. ကျနော်တို့အမှုအရာပုန်းအောင်းကျွန်တော်လုပ်ကိုင်ရန်လမျး၌ slimy ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ "သူကသူဧဝံဂေလိတရားကိုခံထိုက်သောသူတစ်ဦးထုံးစံ၌အသက်ရှင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသိရန်သူတို့ကိုလိုလား.
ဒါဟာတွေအများကြီးသူကပြောသည်ဘယျလိုတူအသံ2ကောရိန္သု 2:17, "ဤမျှလောက်များစွာသောမတူဘဲ, ကျွန်တော်တို့အမြတ်အစွန်းအတှကျဘုရားသခငျ၏တရားစကား peddle ပါဘူး. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုးသားမှုနှင့်အတူဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပွောဆို, ဘုရားသခင်ထံမှလှေတျတျောမူလူကဲ့သို့။”
ပေါလုသည်ဧဝံဂေလိတရားဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်တစ်ဦးအခြို့သောလမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းတောင်းဆိုနေပြီကြောင်းနာ​​းလည်နိုင်. အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ဝန်ကြီးဌာနလြှော့ပေါ့မ. သူကကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောစေခြင်းမခံနိုင်သောနားလည်နိုင်, ဒုစရိုက်အပြစ်၏နောင်တရရန်လူကိုပြောပြ, နောင်တကိုယျ့ကိုယျကို၏ဘဝအသကျရှငျမပါဘဲ.
ကြည့်ရှု, သငျသညျလူတို့နှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှနေလျှင်, ဒါပေမဲ့အဲဒီတူညီတဲ့လူသင်၏အသက်တာတစ်ရှုပ်ထွေးသည်မြင်, သငျသညျဝငျကမျြးဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ. သူတို့ကဒီဧဝံဂေလိတရားကိုသူမကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကဲ့သို့အစွမ်းထက်မဖြစ်ရပါမည်စဉ်းစားနေ, သူမတစ်ဦးရှုပ်ထွေးင်သို့မဟုတ်သူတစ်ဦးရှုပ်ထွေးရဲ့အကြောင်းရင်း.
ကို C. လှည့်စားသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အတူတမ်မနေပါနဲ့
ရှင်ပေါလုပြီးတော့ပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့ကကောက်ကျစ်လေ့ကျင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏စကားလုံးနှင့်အတူတမ်ပါဖို့ငြင်းဆန်။ " ဒါမှမဟုတ်င်းကတတ်၏အဖြစ်, "ကျနော်တို့လှည့်စားမသုံးကြဘူး, မဟုတ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောက်လှန်ကြဘူး။”
ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်, သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှင့်အတူပရိယာယျသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ငြင်းဆန်. သူကဆဲသူလည်ပတ်လမ်းကိုကာကွယ်ဖို့င်. ရှင်ပေါလုနှင့်အတူ tampers တစုံတခုကိုမျှသို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားတျောကိုလှဲချပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ရေသည်ပြုပါမလိမ့်မည်. ဒီတစ်ခါလည်းကသိသာအရာကဲ့သို့မြည်, ဒါပေမဲ့တကယ့်ဒါသိသာမယ့်.
ယနေ့ငါဒီသန်နိဋ်ဌာနျရှိသည်မယ်လို့ပိုပြီးတရားဟောဆရာဆန္ဒရှိ, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောက်လှန်ဖို့မ. အလွန်အကျွံမိုက်မဲသောအထွက်ရှိတယ်အဲဒီမှာင်. သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သောအရာကိုခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းစဉ်းစားနေရတဲ့အခါ, သူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဟောပြောခြင်းင်သေချာအောင်. သူတို့ထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ရှားကနေယူပြီးမဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ. လည်းများစွာသောလူဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယိုယွင်းနေသဖြင့်မိမိတို့အဘို့နာမည်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လေပြီ. ပေါလုရဲ့သူကပြုပါမည်မဟုတ်ဟုဆို.
တစ်ခါတလေအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်သော်လည်းထိုသို့ပြုမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသည်ကိုသိရ. သငျသညျစကားတျောကိုမှောက်လှန်ရန်သင်းအုပ်ဆရာသို့မဟုတ်တစ်တီဗီတရားဟောဆရာဖြစ်ရန်မလိုပါ. သငျသညျဝငျကမျြးနှင့်အတူတမ်ပါရန်နည်းလမ်းအချို့အဘယျသို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါနေကြတယ်? ပိုပြီးအာခေါင်ပုံပေါက်အောင်? အပြစ်တရားအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်? ယရှေုသညျသူတို့ကိုကတိမပေးခဲ့ပါဘူးလူအမှုအရာကတိပေး?
ဒါဟာကြင်နာ၏ဤကဲ့သို့သောင်. ပွဲသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုမှာသငျသညျအစဉျအမွဲခဲ့ရှိသည်နှင့်သင်စားပွဲ၌လျောင်းကြနှင့် iced လက်ဖက်ရည်တစ်ငုံအရင်သောက်ယူနှင့်က unsweetened င်? သင်မုန်းတီးမနေပါနဲ့? အဘယ်ကြောင့် unsweetened ရေခဲလက်ဖက်ရည်ပင်တည်ရှိပါဘူး? ဘယ်သူမှကြောင်း likes. သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြပါဘူး, သင်တို့ကဲ့သို့ယူ 18 သကြား packets တွေကိုနှင့်ကချိုမြိန်ပါစေဖို့ကြိုးစား, unsweetened လက်ဖက်ရည်အချည်းနှီးသောကွောငျ့.
အလားတူထုံးစံ၌, လူလှတဲ့အဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားကိုမြင်, လူရဲ့အရသာဘူးသီးဖို့လုံလောက်တဲ့ချိုမြိန်မဟုတ်. ဒါကြောင့်သူတို့က add. သူတို့ကဒဏ်ငွေင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့လုံးဝကဖယ်ရှားပစ်ရကြဘူးအဖြစ်တွက်ဆ. သူတို့ကပဲအဲဒီမှာကနှင့်အတူအခြားအရာတစ်ခုခုရောနှောချင်, ကလိုလူကပိုလုပ်. ဒီလိုလုပ်ဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာဖြစ်ပါသည်! ထိုသို့သင်အမှန်တကယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုမြင်ပုံကိုထုတ်ဖော်ပြသ.
: D. နိုင်ငံတော်အမှန်တရားထို့နှင့်၎င်းသည်တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ပါစေ
ဧဝံဂေလိတရားကိုလုံလောက်ပါတယ်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသမ္မာတရားကိုဖော်ပြ. ဒါဟာဝန်ခံယုံကြည်ခြင်းအားသို့သူတို့ကိုငါလှည့်စားရန်ဘယ်သူ့ကိုမှမဆိုကောင်းသောအကျင့်ကိုမပါဘူး. သမ္မာတရားကိုမှထည့်သွင်းခြင်းမကျြနှာဖုံးကိုထုတ်လုပ်; ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမရွှေ့ဘူး. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်လှပသောမျက်နှာရှိပါက, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကုလားကာနှင့်ဖုံး? ဒါဟာသူမရဲ့ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုလုပ်မထားဘူး; သူကသူမ၏စစ်မှန်တဲ့အလှတရားဖုံးကွယ်. ကချစ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုအပေါ်ကိုတက်စေပါထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့. ခရစ်တော်၏စစ်မှန်တဲ့ဘုန်းအသရေတဆင့်ထွန်းလင်းမယ်လို့ချောင်ကစို့.
တောင်မှငြင်းပယ်ခံရ၏အလယ်၌, ကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းသည်မသင့်. ကျနော်တို့ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုဆန့်ကျင်သောလမ်းတှငျနထေိုငျမနေသင့်, ငါတို့သည်လည်းတူလူလုပ်ဖို့ကြိုးစားမှသတင်းစကားကိုမပြောင်းသင့်ပါ. ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုဟောပြောသင့်ပါတယ်, ငါတို့သည်သူတို့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်ချင်သောကြောင့်,.
II ကို. စာတန်၏လုပ်ငန်းခွင်သတိပြုပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိပြုမိရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြားနားလည်မှုလွဲမှားရှိပါတယ်. အချို့လူများကစာတနျသအခြေခံအားဖြင့်အားလုံးအစွမ်းထက်ကြောင်းစဉ်းစား၏အစွန်းရောက်ဖို့သွား. ဖြစ်ပျက်သမျှမိမိအကြီးသောတန်ခိုး၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်, သူကလုပ်ဖို့လိုလားအခါတိုင်းသူလိုလားသမျှအတိုင်းပြုနိုင်ပါတယ်. ထိုအခါအခြားအစွန်းရောက်ဖို့သွားသူအချို့ရှိပါတယ်. သူတို့ကမဟုတ်မမှန်စာတနျသတည်ရှိသို့မဟုတ်သူအာဏာမဲ့နှင့်မလှုပ်မရှားရဲ့မပါဘူးဖြစ်စေကြောင်းယုံကြည်. ဤသူအစွန်း၏န​​ှစ်ဦးစလုံးသည်မုသာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ရန်အဘို့အအန္တရာယ်.
သမ္မာတရားကိုစာတနျသအာဏာရှိသည်တတ်သည်, သူသည်ပေါလုနှင့်သူ၏ဝန်ကြီးဌာနကဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်လုံလောက်တဲ့အာဏာကို. ကျမ်းပိုဒ်သုံးလေးယောက်ကိုနားထောင်.
“နှင့်ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်ပင်, ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသောသူတို့အားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ. သူတို့၏အမှု၌ဤကမ္ဘာ၏ဘုရားမယုံကြည်သောသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်မကျြစိကှဖြစ်ပါတယ်, ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအလငျးကိုမွငျလြှငျမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်ပါသည်။”
ပေါလုဆန့်ကျင်ဝေဖန်တယောက်သူအချို့မှသူ၏သတင်းစကားကိုပုန်းအောင်းခဲ့ကွောငျးခဲ့ပုံရ, သူကကိုမြင်လျှင်မှလူတချို့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကွောငျး. ပေါလုရဲ့တုန့်ပြန်ဖြစ်ပါသည်, သတင်းစကားအချို့ထံမှဝှက်ထားလျက်ရှိ၏လျှင်, ဒါကြောင့်ကွယ်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုမှ hidden င်. ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
ပေါလုကသတင်းစကားများ၏နျကနျကွောငျးကိုမမွငျနိုငျသောလူအကွယ်နေသောအတူတူလူဖြစ်ကြ၏ဟု. ဒီအတွက်ကရှင်းပါတယ် 1 ကောရိန္သု 1:18 ပေါလုကပြောပါတယ်, "လက်ဝါးကပ်တိုင်၏သတင်းစကားကိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသောသူတို့အားမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏…" ဒါဟာသူတို့ကိုမှမိုက်ကြည့်. ဝိညာဏမျက်မှောက်အတူတစ်နေရာရာမှာလူတချို့ရှိတယ်မဟုတ်, ဘုရားသခငျသညျရဲ့ကတိအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့သူ, အဘယ်သူသည်ထာဝရအသက်အမွေခံရလိမ့်မည်, လည်းဧဝံဂေလိတရားကိုမိုက်မဲသည်ထင်သောသူ. သူတို့သညျလူမတည်ရှိပါဘူး.
သူကဘုရားသခင်ကိုမသိသောသောသူတို့အားအပြစ်ပေးမည်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်ကြဘူး. သူတို့က, ထာဝရပျက်စီးခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်နေ့ခြင်းတွင်ထာဝရဘုရားအထံတော်မှတန်ခိုး၏တန်ခိုးအာနုဘော်တော်မှထွက်ကိုပိတျထားသူသည်မိမိအဘို့သန့်ရှင်းသောလူစုကိုချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမှကြွလာနှင့်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူတွေထဲမှာမှာအံ့ဩခံရဖို့ပါလိမ့်မည်. (2 သက်သာလောနိတ် 1:8-10တစ်ဦး)
ဒါကကျွန်တော်ကစားမယ့်ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး. ဒီဝန်ကြီးဌာနကအသက်သို့မဟုတ်သေဆုံးဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်ပါသည်. ဧဝံဂေလိတရားကိုဤသတင်းစကားကိုငြင်းပယ်သောသူတို့သညျ, ဘုရားသခငျသညျငွငျးပယျ. ထိုအခါကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်သောသူတို့အပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်နှင့်အစဉ်အမြဲအပြစ်ပေးခံရ.
B က. စာတနျသလိုက်ကာမယုံနိုင်စရာ
သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဤလူမမွငျနိုငျ? စာတနျသလာဘယ်မှာဤသူကား. ပေါလုကသူ့ကိုခေါ်ဆို "ဤလောက၏ဘုရားသည်။ " ဒါကြောင့်သူအချို့အာဏာကိုရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အာဏာကို. သူသည်ဤကမ္ဘာ၏ဘုရားသို့မဟုတ်ဤအသက်အရွယ်ကိုခေါ်မယ့်, သာဒီအသက်အရွယ်.
ယခုငါတို့စာတန်သည်ငါတို့ကိုမုန်းသိအဖြစ်. ကျမ်းစာ၌ပါသူကကိုက်စားနိုင်သူတစ်ဦးဦးကိုရှာဖွေနေသည်မြေကြီးကိုပတ်ပတ်လည် prowls ကပြောပါတယ်. သူသညျဘုရားသခငျရဲ့ရန်ဘက်ပြုသောင် (တနျးတူမ), နှင့်ယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတဦးကိုတည်ရှိသည်အစားဘုရားသခင်၏သမ္မာတရား. ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုစာတနျသဤနေရာတွင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုရပေ? ပေါလုသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောကြောင့်ဤလူကပြောပါတယ်, သို့မဟုတ်သူကသူတို့ကိုခေါ်ဆိုအဖြစ်, မယုံကြည်သောသူတို့, စာတန်သည်လည်းသူတို့ကွယ်သောကြောင့်, သူတို့မမွငျနိုငျ.
ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရဖို့ကဘယ်လောက်အံ့သြစရာများနှင့်အရေးကြီးသောအထောက်အထားဖြစ်သင့်. စာတန်၏အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခုကကိုမြင်လျှင်မှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါက. စာတနျသခြောကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေကိုမမွငျနိုငျပါစေယခုအထိကျွန်တော်တို့ကိုမျက်စိကန်းအဖြစ်ဝင်.
ဘုရားသခငျ့ဘုနျးတျောကိုအဘယျသို့ဖွစျသညျ? ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကသူ့အလေးချိန်ဖြစ်ပါသည်, မိမိအအလှတရား, ဂုဏ်အသရေ, တန်ခိုးအာနုဘော်, ကြီးမားခြင်း, နှင့်ရောင်ခြည်. ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ဘွဲ့, နှင့်သူ၏လူတို့တွင်အထံ.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကစာတန်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာရက်ပ်ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အနုပညာလက်ရာများမှာပိရမစ်သို့မဟုတ်တစ်မျက်စိအမှတ်လက္ခဏာတွေနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတက် trip ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်. ကြည့်ရှု, စာတန်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာရက်ပ်အယ်လ်ဘမ်တွေနဲ့ Illuminati ပူးပေါင်းသို့လှည့်စားရန်မဖြစ်. စာတန်၏အဓိကရည်မှန်းချက်ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်လျှင်ထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ထိုလူ၏မြင်ချင်ရဲ့. စာတန်သည်ငါတို့ကိုဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်တယ်. စာတနျသညျကြှနျုပျတို့၏ရန်သူနှင့်ခရစျ၏အကြောင်းရင်း၏ရန်သူဖြစ်ပါသည်.
စာတန်သည်ငါတို့ကိုဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုကွောကျရှံ့ဖြစ်ချင်ပါဘူး. သူကကျွန်တော်တို့ကိုဤလောကကိုအစိုးရသောဘုန်းအသရေနှင့်အတူ enamored ခံရဖို့လိုလား. သူကပိုက်ဆံနှင့်အတူတက်ချည်ထားခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုလား, နှင့်လူကြိုက်များ, နှင့်စုံလင်သောဆက်ဆံရေး, နှင့်အောင်မြင်မှု. စာတန်သည်ငါတို့ကိုယာယီအတူဒါကြောင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိုလား, မွကွေီးဘုန်းအသရေ, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေမှကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကြောင်း. သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံရန်အဘို့အဒါပေမယ့်မလောက်မယ့် - သူကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်.
သငျသညျစာတနျသငျသညျလူကန်းတို့နှင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုကြည့်ထံမှသင်တို့ဟန့်တားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ဖူး? သငျသညျဤလောက၏၏ဘုန်းလိုက်ဖမ်းအစားဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေနေကြတယ်? ဒါကြောင့် အကယ်., သငျသညျသူ့လက်သို့ကစားခြင်းနှင့်သူကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ဖို့လိုလားအတိအကျဘာလုပ်နေကြ. ကျွန်တော်တို့ယေရှု၌ယုံကြည်သူများအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်အဲဒီင်, ကျွန်တော်တို့ကလူသညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်ချင်သောကြောင့်,, သူတို့ခရစ်တော်ယုံကြည်ကိုးစားမယ်လို့, နှင့်သူတို့၏ဘဝများနှင့်အတူဘုရားသခင့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောကွ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးအခုအချိန်မှာဒါကြောင့်မှောင်မိုက်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကတွေးမိ. လူဒါအပွစျရှိနေကြသည်အဘယ်ကြောင့်, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆီသို့ဦးတည်မုန်းတီးမှု, နှင့်ဘုရားသခင်ဆီသို့ဦးတည်ရန်လို. ကောင်းပြီဒီမှာအဖြေကိုဖွင့်. သူတို့ကမျက်စိကန်းနေ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်တို့သည်နောက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူမျှဝေခဲ့ကြရတယ်နှင့်သင်ပင်ပန်းနေ. ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ပုံရတယ်. ကျနော်တို့စိတ်ပျက်ရနဲ့လူအပေါ်ကိုတက်မပေးသင့်ပါ. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုကယ်တင်နိုင်လျှင်, သူမည်သူမဆိုကိုကယျတငျနိုငျ! ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုကယျတငျနိုငျလြှငျ, သူမည်သူမဆိုကိုကယျတငျနိုငျ. သူတို့ကမျက်စိကန်း, သူတို့ကမြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ကိုမြင်ကူညီပါ.
ဤသည်ကိုလည်းလူဧဝံဂေလိတရားကိုငြင်းပယ်သောအခါကျွန်တော်တို့ကိုပြသထားတယ်, ထိုသို့သတင်းစကားကန်းသောသူကိုသငျသညျသူ့မျက်စိထဲမှာထွန်းလင်းသတိထားမိမှာမပါဘူးဆိုရင်တကလက်နှိပ်ဓာတ်မီးချို့ယွင်းချက်သည်ကိုဆိုလိုသည်ထက်မဆိုပိုပြီးအပြစ်အနာဖြစ်ပါတယ်မဆိုလိုပါ. မျက်မမြင်လူမမြင်မိပါဘူး.
ငြင်းပယ်ခံရသငျသညျစကားတျောကိုသံသယဖြစ်စေခြင်းငှါမခံပါနဲ့. မျက်စိကန်းသောလူတို့သည် Mona Lisa ကိုဘယ်လောက်လှပတဲ့မမွငျနိုငျသောအချက်, ဒါကြောင့်အဆင်းလှမင့်မဆိုလိုပါဘူး. ကျနော်တို့ကိုမမွငျနိုငျသောယောက်ျားအပေါ်အနုပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အခြေခံပါဘူး.
ကို C. ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏ပုံရိပ်ဖြစ်
ရှင်ပေါလုစာတနျသမြင်လျှင်မှသူတို့ကိုကွယ်ကပြောပါတယ် ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေ၏ဧဝံဂေလိတရားကို၏ "အလင်း, ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်၏။ " မဟောပွောခရစ်တော်ကလူသညျဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေကိုပြသထားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကား, ယရှေုခရညျဘုရားသခငျ၏အလွန်ပုံရိပ်သောကွောငျ့.
ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏မယ့်ပရောဖကျတမဟုတ်. သူကဘုရားသခင်ထံမှစလှေတျတျောရုံလ​​ူကိုမဖြစ်. သူသညျဘုရားသခငျ၏င့်သားတော်သည်မဟုတ်. သူသညျဘုရားသခငျ၏အလွန်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ထိုသို့ယရှေုသညျကိုဆိုလို, ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ခြင်း, ခမည်းတော်၏ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားပြုမှုသည်. သငျသညျဘုရားသခငျ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တူသောအရာကိုသိရန်လိုပါလျှင်, ယရှေုသညျကွညျ့ရှု. ဘုရားသခငျသညျ၏ကရုဏာ? ယရှေုသညျမှာကြည့်ပါ. ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဆိုးသောသူတို့နှင့် ပတ်သက်. ခံစားရပါဘူး? ယရှေုသညျမှာကြည့်ပါ. ယရှေုသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ၌ဘုရားသခင်ဖြစ်, စုံလင်သောပုံရိပ်.
မြင်နိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာအကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျ၏အက​​ျင့်ကိုမြင်, ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ရှိ, Emmanuel, "အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသညျဘုရားသခငျ။ " ဟုယရှေုခရစျ၏မျက်နှာ၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေအများဆုံးမြိန်စွာထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျမသာဘုရားသခင့်ဂုဏ်တော်ရှိပါတယ်မသိသောကြောင့်,, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်းမရှိ. - ချားလ်စ် Spurgeon
ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဖူး, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခငျသညျတစျဦးနှင့်သာလျှင်, ခမညျးတျောရဲ့အခြမ်းမှာအဘယ်သူသည်, သူ့ကိုလူသိများစေတော်မူပြီ. (ယောဟနျသ 1:18)
ထိုနည်းတူယောက်ျားခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေ၏ဧဝံဂေလိတရား၏အလင်းကိုမြင်ရလျှင်, သူတို့သူ၏ဘုန်းအသရေအတွက်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရ. စာတန်သည်လည်းသူတို့ကမြင်ချင်ပါဘူး.
စာတန်သည်လူတို့သညျမကျြစိကှဖြစ်ပါတယ်, အဘယျအကြှနျုပျတို့ပွုဖို့ထင်နေကြတယ်? စာတနျသ "ဤလောက၏ဘုရား။ " ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ကသူကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်လာကြသောအခါလုပ်ဖို့ထင်နေကြတယ်အဘယျသို့?
III ကို. ဝန်ကြီးများ၏လုပ်ငန်းခွင်ကိုခင်တွယ်
“ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မကကြွေးကြော်ဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ, ဒါပေမယ့်သခင်အဖြစ်သညျယရှေုခရစျသ, ကိုယျ့ကိုယျကိုအတူယေရှုအတွက်သင်တို့၏ကျွန်အဖြစ်။”
ပေါလုကပြောနေ, သူတို့ခရစ်တော်ကိုမမွငျနိုငျသောကွောငျ့လူကိုငါ့သတင်းစကားကိုငြင်းပယ်. ထိုအခါခရစ်တော်သည်အကြှနျုပျတို့ဟောပွောကားအဘယ်သို့. သူတို့ကငါ့ကိုငြင်းပယ်ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်.
ဧဝံဂေလိတရားကိုတစ်ဦးန်ကြီးအဖြစ်, သငျသညျတစျမူလတန်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ. ခရစ်တော်ကြွေးကြော်. ကျနော်တို့ကဆင်း bogged ရ, နှင့်ရှုပ်ထွေး, နှင့်စိတ်ဓာတ်, ကျွန်တော်တို့ကိုပယ်၏အဓိကအရာကနေရသောကြောင့်,. ယေရှုအကြောင်းကလူကိုပြောပြပါ.
သငျသညျပျောက်ဆုံးသူတယောက်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်သို့ရောက်သောအခါ, မြော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ, ဘုရားမရှိနှင့်သင်တို့ပြုသင့်ပါတယ်အဘယျသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ. ယေရှုအကြောင်းကြောင်းလူတစ်ဦးကိုပြောပြပါ. ဒါကသူတို့လိုအပျတယျ. ဟုတ်ကဲ့သူတို့အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြီ. ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ယေရှု.
သင်အမှန်တကယ်ယောက်ျားဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ထိုသို့အခြားအရာကိုဟောခြင်းငှါသူတို့ကိုကောင်းသောအရာမပါဘူး. အခုကလူတွေကောင်းစွာသူတို့ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်မကူညီကြဘူးမဆိုလိုပါ, ဒါကြောင့်ပဲခရစ်တော်၏အလယ်ဗဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်. ယရှေုသညျအခြေခံအုတ်မြစ်မပါရှိလျှင်, ထိုလှုံ့ဆော်မှု, ကြှနျုပျတို့ဟောပွောအခြားအရာအားလုံးနောက်ကွယ်ကလောင်စာ, ကျွန်တော်တို့ကြာရှည်မည်မဟုတ်ဘာလုပ်နေလဲင်.
ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောဖို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကျနော်တို့ပေါလုသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုရည်ညွှန်းကြောင်းစာသား၏ကျန်မှတခြားနေရာကျမ်းစာ၌သိ. ပေါလုက "ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သော မှလွဲ. သင်တို့တွင်အဘယ်အရာကိုမျှမသိရဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်။ " ပေါလုသည်ယေရှုအကြောင်းသတင်းစကားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူပြုသောအမှုနှင့်သူကယ်တင်ဘယ်လိုင်ဆိုလိုသည်အကောရိန္သုဖို့ပြောပါတယ်.
သင်ဒီမှာယနေ့ညနေနှင့်သင်သည်ထိုဧဝံဂေလိတရားကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမသိလျှင်, သငျသညျထားခဲ့တော်ရှေ့မှာထို့နောက်ကြောင်းကိုသင်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်. ဧဝံဂေလိတရားကိုအဘယျအထဲကပုံနှင့်သင်ကယုံကြည်ဖြစ်စေမ. ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုသတင်းစကား၏အဓိကမှာ, ဘုရားသခငျသညျသနျ့ရှငျးသောသောအမှန်တရား, အဓိကအပွစျရှိသည်, ခရစ်တော်စုံလင်ခြင်းရှိ၏နှင့်ဆိုးသောသူတို့အဘို့အသေခံတော်မူ၏, သူသင်္ချိုင်းမှထမြောက်. ခရစ်တော်၏အပြစ်နဲ့ယုံကြည်မှုကနေဖွင့်သောသူတို့အကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်. သင်တို့ကိုဟောပြောဖို့လို့ချေါခဲ့ဖူးတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်.
သငျသညျကိုအခြားသူများကိုမကယ်တင်နိုင်. သငျသညျမညျသူမဆိုအဘို့အသေမနိုင်. သငျသညျမညျသူမဆိုရဲ့နှလုံးမပြောင်းနိုင်. သငျသညျကိုသာခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောနိုင်. သူတို့ကိုကယ်ဖို့မကြိုးစားပါ, ဘယ်သူတ ပတ်သက်. သူတို့ကိုပြောပြ. စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မကြိုးစားပါ, ဘယ်သူတ ပတ်သက်. သူတို့ကိုပြောပြ. သူတို့ကို clean up လုပ်ဖို့မကြိုးစားပါ, ဘယ်သူတ ပတ်သက်. သူတို့ကိုပြောပြ.
အဘယ်ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကို? ဤဘုရားကလူကိုရှေးခယျြခဲ့ပုံသောကြောင့်,, သူတို့သတင်းကောင်းကိုကြားလျှင်. ထိုသို့ဤကျမ်းပိုဒ်ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, ဘုရားသခငျ့ဘုနျးတျောကိုရှင်းလင်းစွာသားတော်ကိုအကြောင်းသတင်းကောင်းတွင်တွေ့မြင်ကြောင်း.
ဒီအတိတ်အပတ်က, ငါသည်ငါ့အသင်းတော်၌ယုံကြည်သူများထံမှနှစ်ဦးသက်သေခံတော်မူချက်ကြားသိ. ဤရွေ့ကားလူနှစ်ဦးကအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိခဲ့. တစျခုဖွင့်သော့ခတ်ခဲ့သူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချသူခဲ့သည်. နောက်ထပ်ကောင်းတစ်မိန်းကလေးတစ်ခဲ့သည်, ဘုရားသခငျသညျမုနျးသော. သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဧဝံဂေလိတရားကိုသူတို့နှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်းများစွာ shared ခဲ့. ထိုအခါသူတို့ကမယုံကြ. တဖန်သင်တို့နောက်ဆုံးတော့ခရစ်တော်ယုံကြည်ရန်သူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့အရာကိုသိ? အခြားသူတစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့နှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားကို shared. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အလုပ်လုပ်သွားသောအခါသိဘယ်တော့မှ, သို့မဟုတ်ဘုရားသခင့အလုပ်လုပ်သွားပုံကို. ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ယေရှုအကြောင်းကလူကိုပြောပြပါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကယရှေု၏ဘုန်းအသရေကိုကြည့်ရှုနိုင်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏လက်နက်များသည်အဇာတိပကတိ၏မဟုတ်ပေမယ့်ခိုင်ခံ့ဖျက်ဆီးဖို့ဘုရားသခငျ့အာဏာရှိသည်. ကျနော်တို့ကိုဖကျြဆီးအငြင်းပွားမှုများနှင့်ဘုရားသခင်၏အသိပညာဆန့်ကျင်ထမြောက်တော်မူသည်ကိုမြတ်သောအမြင်, ခရစျတျောကိုနာခံဖို့တိုင်းအတွေးသည်သိမ်းယူ, တိုင်းမနာခံမှုအပြစ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း, သင့်ရဲ့နာခံမှုပြီးဆုံးသောအခါ. (2 ကောရိန္သု 10:5-6)
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေခံတော်မူချက်ကိုမျှဝေလို, ကောင်းမြတ်သောအရာသည်. ဧဝံဂေလိတရားကိုပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါသောအခါမူကားငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုကွှေးကျွောခွငျးကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို. "ကျွန်မနေတဲ့ crackhead ခဲ့သည်, ထို့နောက်ငါမဟုတ်ခဲ့။ "လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်း That's, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုငါကယ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်?!! သငျသညျဆိုလိုသို့မဟုတ်မပဲဖြစ်ဖြစ်, ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဟောပြောခြင်းင်. ကျနော်တို့ပေါလုကသူသည်ဤကျမ်းပိုဒ်၌ပြုမထားဘူးပြောပါတယ်အလွန်အရာလုပ်နေကြ. သင့်ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုဝေမျှပြုပါကျေးဇူးပြုပြီး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းသတင်းကောင်းကိုပြောပြ.
B က. အမှန်တရားကိုလိုအပ်သူကားအဘယ်သူသူများသည်ကျွန် Be
အဘယျသို့နညျးလမျးမြား၌သငျဝငျကမျြးမျှဝေခဲ့ကြသည်နောက်ကျ? သင်တို့နှင့်အတူအမျှဝေခဲ့ကြသူကားအဘယ်သူ? သင်ဆံကုလားထိုင်၌ထိုင်တဲ့အခါသင်အကွောငျးဘာစကားပြောဘူး, သို့မဟုတ်သင့်ဆံပင်အမှုကိုပြုရသည့်အခါ? သငျသညျအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်မိနစ်အနည်းငယ်ရလာသောအခါသင်သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ဖို့ဘာဆိုကြ?
ဒါကစကားလုံးကျွန်ကဲ့သို့ဘာသာပြန်ထားသော, စာသားကျွန်ဆိုလိုသည်. သူကငါသခင်အဖြစ်ခရစ်တော်ကြွေးကြော်ဟူမူကားရဲ့, သင့်ရဲ့ကျွန်အဖြစ်ငါ့ကို, ယေရှုအတွက်. ဒါကအံ့သြဖွယ်င်. ထိုအခါပေါလုဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကပြောပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မဟုတ်ဘူး.
ငါအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမဆိုင်သော်လည်း, ငါလူတိုင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, တတ်နိုင်သမျှအများအပြားအနိုင်ရ. (1 ကောရိန္သု 9:19)
တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ထံမ​​ှဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောငျတျောရန်အဘို့အ, ထိုသို့စုံလင်သောအခွအေနေဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး? ငါမမျှော်လင့်ပါတယ်. ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်ချင်, ပင်ကိုအခြားသူများခရစ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ရလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အယှက်.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကအရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေကြသည်. ကျနော်တို့ဟာအများကြီးအလုပ်လုပ်, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာအများကြီးအစေခံ, ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကို non-ခရစ်ယာန်တွေကိုအတူအချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့. တစ်ခါတလေကဲ့သို့ခံစားရ. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းမှတက်ခရစ်တော်အကြောင်းလူတွေကိုပြောပြမချန်မထားသင့်ပါ. ကျနော်တို့ဧဝံဂေလိပတ်ပတ်လည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်. ခရစ်တော်အကြောင်းကိုအခြားလူများပြောပြရန်ယဇျပူဇျော Make.
ငါသည်ဤအခန်း၌အဘယ်သူသည်ဧဝံဂေလိဝေမျှဖို့အခြားတိုင်းပြည်သွားစဉ်းစားမိ? မသိရပါဘူးသူတွေကိုရှိပါတယ်. မျက်စိကန်းသောနေသောလူရှိပါတယ်. တခြားနေရာသွားကြဖို့ဆန္ဒရှိမြို့ပြသာသနာပြုများအဘယ်မှာရှိကြသနည်း?
ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြော, ဒါကြောင့်ယောက်ျားဘုရားသခငျသညျမွငျနိုငျ. ယောက်ျားမျက်စိကန်းလျှင်မူကားခရစ်တော်ကဟောပွောခွငျး၏အချက်အဘယျသို့င်?
evangelized ခံရကမ္ဘာပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်မူတည်နေလျှင်, ကစာသားမဖြစ်နိုင်ဘူး. ကျနော်တို့မျက်စိကန်းသောမျက်စိမဖွင့်နိုင်. ကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသညျအားလုံးသူတို့အပျေါမှာဟောပြောခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်. ဘုရားသခငျသညျမဖွစျနိုငျလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းသည်? ဖြစ်နိုင်စရာ.
တမန်တော်များတွင် 26:18, ယရှေုသညျပေါလုအားကပြောပါတယ်, "ငါသည်သူတို့ကိုရန်သင့်အားငါစေလွှတ်, သူတို့မျက်စိဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အလင်းသည်မှောင်မိုက်ထဲကနေသူတို့ကိုဖွင့်ဖို့, စာတန်၏တန်ခိုးမှဘုရားသခင်အား, သူတို့အပွစျမြား၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ငါ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောသူတို့တွင်နေရာတစ်နေရာခံယူစေခြင်းငှါဒါကြောင့်။ "
ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်? လူသားကမပွုနိုငျ. ကျမ်းပိုဒ်ကိုနားထောင် 6.
“ဘုရားသခင်အဘို့, အဘယ်သူသည်ဟုဆိုသည်, "မှောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းပါစေ,"ယရှေုခရစျ၏မျက်နှာ၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းရာအလငျးကိုပေးစေခြင်းငှါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ထွန်းလင်းခဲ့သည်။”
ရှင်ပေါလုသညျဘုရားသခငျသူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတဲ့ဒုတိယကြာ. သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ခြေရာခံစံချိန်တစ်ခုအမြန်သတိပေးပေးဖို့လိုလား. ဒါကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေင်သူတစ်ဦးဘုရားမဟုတ်. ဤသည်ပင်တစ်ဦးသန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမနေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်ခဲ့သူတစ်ဦးဘုရားမဟုတ်. ဒီဖန်တီးခဲ့သူတစ်ဦးဘုရားမဟုတ်. ဤသည်အဘယ်သူ၏လက်ကိုဤလောကကိုအစိုးရလို့ခေါ်ဘုရားတနေဖြင့်ချည်ထားကြသည်တဲ့ဘုရားမဟုတ်. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအခြားလူကိုသွားနေတာပါဘုရားသခငျသညျလုံးဝဘာမှမထံမှလုံးဝအရာအားလုံးကဖန်တီးသောသူတူညီတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်.
သူမျှသာစကားနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးဖန်တီးနိုင်လျှင်, သူကမျက်စိကန်းကိုဆောင် ခဲ့. နိုင်, အသက်ရှင်ခြင်းလူသေ.
မျက်စိကန်းသောမျက်စိငါတို့ဘုရားသခင်အဘို့အဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ကစားကြသည်. မတရားသောသူသည်စိတ်သောငါတို့၏ဘုရားသခင်အဘို့အဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ကစားကြသည်. မှောင်မိုက်စိတ်နှလုံးကိုငါတို့ဘုရားသခင်အဘို့အဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ကစားကြသည်. ဟုသူကပြောသည်, တစ်ချိန်က "အလင်းရှိဖွစျပါစေ" နှင့်သူပြန်ဆိုနိုင်. ပေါလုအောင်သည်အမှတ်င်.
သူကိုအသုံးပြုသည်အဆိုပါပုံရိပ်ကဒီကဲ့သို့ဖြစ်၏. ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုကြီးမားတဲ့အခန်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ကြောင်းအစေးအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်. နံရံအထူရှိပါတယ်. အဘယ်သူမျှမပြတင်းပေါက်ရှိပါတယ်. အဘယ်သူမျှမမီးခွက်ရှိပါတယ်. အဘယ်သူမျှမအလင်းအိမ်. အောက်မှာတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မှအလင်းအဘို့အဘယ်သူမျှမကတံခါးရွက်. ဤအမှုအလုံးစုံအခန်းအစဉ်အဆက်ပြင်သည်မှောင်မိုက်သည်လူသိများခဲ့သည်. တစ်စုံတစ်ဦးကမှောင်မိုက်တဲ့အခန်းအပြင်ဘက်ရပ်များနှင့်ခရစ်တော်သခင်သည်အော်ဟစ်သောအခါအဧဝံဂေလိဖြစ်ပါသည်. သို့သော်အလင်းနေဆဲအပေါ်မလာပါဘူး. သူတို့ကအခြားဘက်ခြမ်းနှင့်အော်ဟစ်ကိုသွား, အပြစ်အတွက်အသေခံတော်မူပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏! ဆဲခြင်းမရှိအလင်းအိမ်. ပြီးတော့အခြားအချိန်အတူတူသတင်းများ shared ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်သညျဘုရားသခငျ၏ကရုဏာ၏ဖျက်ဆီးဘောလုံးကိုသူတို့အားရိုးကိုတဦးမှတဆင့်တစ်ဖွဲ့လုံးချိုးပြီနှငျ့သငျအစဉ်အဆက်ကိုမွငျဖူးတဲ့တောက်ပအလင်းမှတဆင့်ထွန်းလင်း. ဒါကတခါမိုက်အခန်းယခုအခါဘယ်အခန်းအစဉ်အဆက်ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့တောက်ပဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့ပြုပါရန်ဘုရားသခကြာ.
ခရစ်ယာန်, သငျသညျယရှေု၏မျက်နှာ၌ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်ရပါတယ်လျှင်, သငျသညျအလငျးကိုမှောင်မိုက်လွှဲပြီးပြီဆိုပါက, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပွုမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာသင်တို့နှင့်အတူအမျှဝေသူကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အကျင့်သောအကျင့်ကိုမဖွင့်. ဘုရားသခငျ့ဒါဟာလုပ်နေကြင်. သာဘုရားသခင်ကလုပျနိုငျ. ဤလောက၏ဘုရားယေရှု၏ဘုန်းအသရေထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်နေချိန်တွင်, စစ်မှန်တဲ့နှင့်အသက်ရှင်သောဘုရားစိတ်နှလုံးထဲသို့အလင်းထွန်းလင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောမျက်စိဖွင့်လှစ်. ထိုအခါသူကထိုသို့ပြုမှသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုသည်.
ကို C. ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်အတူပုံမှန်သညျယရှေုမှာလိုက်ရှာ
သငျသညျဘုရားသခငျသညျသငျသညျအဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယျသို့နားလညျပွုပါ? ကျွန်တော်တို့တစ်တွေအများကြီး, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပါအဝင်, ဧဝံဂေလိအကြောင်းလုံလောက်အသည်းအသန်မဟုတ်, ငါတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေမှာစေ့စေ့ကြည့်ရှုရကြောင်းလုံလောက်စွာကျေးဇူးတင်မဟုတ်ပါဘူးကွောငျ့,. ငါတို့သည် သာ. ဖမ်းမိခဲ့သည်ဆိုပါက, ငါတို့ဘုရားသခငျနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုတွင်ရှိသည်နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားလာ, ငါတို့သည် သာ. အခြားလူများပြောပြမယ်လို့. ကျနော်တို့မကြိုက်ဘူးရှိုးအကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြ, ကောင်းသောအယ်လ်ဘမ်, နှင့်ကွန်ဖရ. ယေရှုအကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြပါနဲ့? ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုချစ်မိတဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေမယ့်တခြားသူတွေနဲ့မျှဝေမပေးနိုငျ.
ခရစ်ယာန်, ဘုရားသခငျသညျအမှု၏အားသာချက်ယူ. ကခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ကိုယ်ကိုစိမ်, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ရှိသေးပယ်သူ၏ဘုန်းအသရေဖြင့်, ခရစ်တော်၏မျက်နှာ၌. သငျသညျကိုယျတျောကိုကိုးစားတဲ့အခါရပ်တန့်မပါဘူး. ဧဝံဂေလိတရားကိုအတိတ်ရွှေ့ဖို့မကြိုးစားပါ! ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောကိုမွငျဘယ်မှာဒါဟာင်. ဒါဟာကျမ်းစာ၌အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြဘာ.
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကသူ၏မေတ္တာခြီးမွှငျ့ကိုဘယ်လို. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကသူ့ကျေးဇူးတရား၏စည်းစိမ်ကိုသွန်းလောင်း. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသည်းခံခြင်းပြသ. ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်သူ၏မျက်မှောက်ပွနျလညျထူထောငျခဲ့မျက်မမြင်လူတို့စဉ်းလဲဉာဏ်နှင့်အတူပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ကြပါဘူး. သငျသညျမျက်စိရှိ. ဒါကြောင့်ကြည့်ရှု.
သငျသညျစိတျဓာတျနေရတဲ့အခါ, သငျသညျအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့သူသတိရ. ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောခွငျး Keep. လူဘုန်းအသရေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြော.
ဒီပြိုလဲမှောင်မိုက်ကမ္ဘာမှာန်ကြီးဌာနခဲ့ဖူး, လွယ်ကူဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. ငါတို့မူကားပေါလုထံမှသင်ယူနိုင်. ကျနော်တို့သင်ယူနိုင်, ပဌမ, မစွန့်လွှတ်သောကြောင့်လူများ၏ငြင်းပယ်ခံရ၏. ဒုတိယ, စာတန်၏အလုပ်သတိထားဖ​​ို့. တတိယ, ဝန်ကြီး၏လုပျငနျးကိုင်စွဲဖို့. ကစတုတ္ထ, ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုအတွက်မျှော်လင့်ဖို့.
ငါအဖြစ်တာသို့မဟုတ်ဘယ်သို့ငါဖြစ်သင့်အဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောရမပေါ့လျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုကြ? ငါကသူ့ကိုစိတ်ဓာတ်သင်စွန့်ခွာချင်ကြဘူး. ခရစ်တော်အားကွညျ့ရှု. ငါသည်သင်တို့ကိုအားပေးအားမြှောက်ဤနေရာတွင်ချန်ထားချင်, ဘုရားသခငျသညျယရှေုကိုသငျသညျအဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယျအမှာ. ထိုသူတို့ကအတူတူပင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်အောင်တခြားသူတွေကိုပြောပြရန်လှုံ့ဆော်.
ယခုဘဝကူးအခါငါတို့အဘို့အသာ options နှစ်ခုရှိပါတယ်. ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမထားကြသူကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့, ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်. အပြစ်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒါကြောင့်စွန့်ခွာ, ယေရှု၏ကရုဏာတော်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုပစ်ချ, ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲဖျက်ဆီးခြင်းကိုသည်းခံလိမ့်မယ်.
ငါတို့မူကားခရစ်တော်အတွက်ဖွင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချလျှင်, ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုယခုသူ၏ဘုန်းအသရေ၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကြည့်ရှုရ. နောက်ပိုင်းတွင်, သူကပြန်လာပြီးနောက်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးအသစ်ကအလောင်းတွေကိုရလိ​​မ့်မည်. အကြှနျုပျတို့အပြည့်အဝအတွက်သူ၏ဘုန်းအသရေမှာစေ့စေ့ကြည့်ရှုလိမ့်မည်, အစဉ်အမြဲ. ဒါကဘုန်းပွင့်သည်. ရှယ်ယာမှာအများကြီးရှိပါတယ်. လူတို့သညျအစဉျအမွဲသညျဘုရားသခငျ၏ဘုနျးတျောမွငျနိုငျဒါဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောခွငျး Keep.
ယာရက် Duba • သြဂုတ်လ 22, 2013 တွင် 1:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအမွေအနှစ်မှာကြီးသင်ဤသတင်းစကားကိုဟောပွောကွားရ. ငါတကယ်ဧဝံဂေလိအပေါ်အလေးပေးတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရှေးရှေးကထိတွေ့ခဲ့အားပေးခဲ့ခဲ့သည်. ဒါဟာအစ convicting နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျဖို့ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်. ကြေးဇူးတငျစကား, bro!
ကြေးဇူး & ငြိမ်းချမ်းရေး,
ဂျေး • သြဂုတ်လ 22, 2013 တွင် 8:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မအကြောင်းသင့်ယောက်ျားတွေပြောသည်အိုးအိမ်မဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာကိုသတိရပါ? သူတို့ကအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။. မဆိုအကူအညီတောင်းကြီးမြတ်ယောက်ျားတွေပါလိမ့်မယ်. ဘုရားသခငျသညျပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ပင်သညျယရှေုသစ္စာမရှိသောရှိခဲ့သည်ရှိရာအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဘူး. LA ကအတွက်လူတိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မယုံမရှိခြင်း၎င်းတို့၏ကျောလှည့်နေသည်. နိုငျငံတျောသညျကိုထောကျပံ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှပေးပေးနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကအစဂီတနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်အမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့သီချင်းစာသားထဲမှာပြောတတ်ကြဘူး. အဖြစ်ကောင်းစွာပျံ့နှံ့ကြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်! ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်သို့ y'all အဘို့ဤအမှုကို. အီးမေးလ်ပို့ရန် livin4christ4lyfe@gmail.com .. ညီအစ်ကိုတို့အားကူညီပေးနိုင်ပါတယ်. အားလုံးကိုချစ်တယ်. နှင့်ခရီးစဉ်, ကူညီဖို့ပါ။. သင်သည်သူတို့၏အသီးမြင်ချင်လျှင်။. YouTube.com/livin4christ4lyfe ထုတ်စစ်ဆေး ..
PJMadsen • သြဂုတ်လ 23, 2013 တွင် 4:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဒါကတကယ်ကောင်းသည်! ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေဖို့မစောင့်နိုင်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါသည်သင်တို့ကို youtube ကအပေါ်ကြားနှင့်တွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်တကယ်ကြိုက်တယ်…ခရီးစဉ် Lee ကဗီဒီယိုအောက်ကပြောပါတယ်အဖြစ်နှင့်လည်းတရားဟောချက်ကိုဖတ်ရှု! “ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုလူတိုင်းကောင်းကြီးပေးကြလော့။”
ဖေါ်ပြ: Oh ဦး preachin' ယခု? @ TripLee116 ထုဖို့စကားလုံးဆောင်တတ်၏ ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • သြဂုတ်လ 23, 2013 တွင် 8:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Excellent ကမက်ဆေ့ခ်ျကို. ကောင်းပြီရေးသားဖော်ပြချက်ရိုးရှင်း. အဆိုပါ subscribe button ကိုဘယ်မှာလဲ? ငါသည်သင်တို့၏ပို့စ်ကိုရှာဖွေငါ့အလိုရှိသမျှစာမျက်နှာများမှတဆင့် scroll ရန်ရှိသည်ချင်ကြပါဘူး. :-) ငါကလက်လွတ်စေခြင်းငှါ,.
SdoubleU • သြဂုတ်လ 24, 2013 တွင် 6:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒါဟာစကားကိုနားထောငျဖို့ငါတကယ်လိုအပ်တစ်ခုခုခဲ့သည်. ဒီ website ကိုငါ့ထံသို့အကြီးအအားပေးမှုခဲ့. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
Amarie • သြဂုတ်လ 25, 2013 တွင် 9:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ unsweetened iced လက်ဖက်ရည် looooooooooooove! ;-)
DJ သမား • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 6:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ, ခရီးစဉ်ကို! ကျေးဇူးပဲကိုယ့်လူ! သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတကယ်ပဲငါ့ကိုမ re-မှုတ်သွင်း. ငါဒါသည်နောက်ကျစိတ်ပျက်အားလျော့ခဲ့ကြရတယ်, ဒီရုံကကူညီပေးခဲ့.
လူနေအိမ်လိုက်ကာ • ဇူလိုင်လ 23, 2019 တွင် 7:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်